Sida loo Delete App iPad joogto ah
Waxaan jeclahay oo dhan degsado barnaamijyadooda kala duwan on our iPad oo isku dayaya baxay. Si kastaba ha ahaatee, jeer ka badan, sidaa darteed waxaa dhici kara in aad kala soo bixi app ah oo kaliya in ay ka dib u heli in aysan wax wixii aad raadineysay. Xaaladaha noocaas ah, waxaa laga yaabaa in aad rabtid in laga takhaluso app, maxaa yeelay, Khasaaradanu maxay ku illowdaa, barnaamijyadooda aad xitaa ma isticmaali doono. Haddii aadan ka war hayaan qaabka ay u tirtiri lahaayeen barnaamijyadooda ka iPad, waxaan halkan u taaganahay si ay u caawiyaan.
Geedi socodka ah ee la tirtiro barnaamijyadooda wuu sahlan yahay oo aan ku qor doonaa talaabooyinka si aad u fahamto hababka ugu wanaagsan ee ay kaas oo aad sidaas samayn kara.
Hab dhaqanka in ay tirtirto barnaamijyadooda ka iPad
1-guji si aad tirtirto oo dhan barnaamijyadooda ka iPad joogto ah
Abaabulaan barnaamijyadooda pre-rakiban
Solution1: hab dhaqanka in ay tirtirto barnaamijyadooda ka iPad
Si ay u tirtiri lahaayeen barnaamijyadooda hab dhaqanka, halkan waa tallaabooyinka aad u baahan tahay in la raaco.
Tag screen guriga aad iPad.
Waxaad arki kartaa oo dhan Chine waxaa ku qoran.
Raadi app aad rabto in aad tirtirto oo ka jaftaa ay u haysta dhowr ilbidhiqsi.
Waxaad ka heli doontaa in dhammaan walxood ee shaashadda bilaabi doonaan in ay ruxmaya.
Chine ayaa ku muujin doonaa line cas oo yar ama karoos cirro kor ku icon ah.
Tubada iskutallaabta oo waxaad heli doontaa degdeg ah ku dooneyso haddii aad rabto in aad tirtirto app.
Guji "Delete 'iyo app la tirtirayaa.
Iyada oo ay tani waxay tirtirtaa app ee ka iPad, marka aad u hagaagsan qalab aad la leedahay PC, app soo celin karaa weli noqon doontaa on Lugood aad. Si aad si buuxda u tirtirto, raac tallaabooyinkan.
Fur Lugood aad kombuutarka iyo madaxa maktabadda.
Laga soo bilaabo menu dropdown ah, dooro 'Apps'.
Waxaad ka heli doontaa liis ah barnaamijyadooda aad shaashadda.
Midig u guji app ee aad dooneyso in aad ka saarto ka dibna dooro "Delete '.
App ayaa si joogto ah la saari doonaa.
Kuwani waa tallaabooyinka fudud oo kuu ogolaaneysaa in aad tirtirto app ee ka iPad.
Haddii aadan rabin in lagu wareeriyay oo dhan, kuwaas oo mashaakil, waxaad dooran kartaa hab kale oo sahlan ee la tirtiro barnaamijyadooda ka. Wondershare SafeEraser fog yahay mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan oo wax ku ool ah aawadood tirka barnaamijyadooda aad si joogto ah by. Waxaad riix kartaa badhamada Download hoose si aad u dejisan maxkamadda si xor ah u leeyihiin isku day ah.
Haddii aadan ka war maxay software waxan sameeya, halkan waxaa ku qoran liiska mid ah qaababka ugu muhiimsan oo ay u leeyahay in ay bixiyaan.
Cadeeyo meel bannaan oo dheeraad ah in qalabka Apple aad by takhaluso oo ka mid ah barnaamijyadooda la rabin.
Waxaad si joogto ah u tirtiri kartaa xogta kaas oo hubiya in tuugada ma awoodi doonaan in ay xadaan macluumaadka gaarka kuu ah.
Waxaad ku dedejin kartaa qalab aad uga takhalustid files junk.
Waxaad uga takhalusi karo noocyada kala duwan ee files oo ay ku jiraan sawiro videos, mails, jadwalka taariikhda, Bookmarks, fariimaha iyo in ka badan.
Waxaad gebi dib kartaa qalab aad sidoo kale.
Markii aad raadinayso in laga takhaluso barnaamijyadooda aad oo gargaar ka click hal, halkan waa talaabooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay in aad raacdo.
Ku rakib SafeEraser Wondershare aad kombuutarka oo abuurtaan.
Hadda, qaado iPad iyo xerto PC la mid ah iyadoo la kaashanayo cable USB ah.
Waxaad ka heli doontaa iPad ku qoran uu furmo suuqa ugu weyn.
In daaqaddii aad arki doonaa, guji "Delete All Data ' oo jooga dhinaca bidix noqon doonaa.
In screen sheegaan waxa soo socda, waxaad u baahan tahay in nooca 'tirtirto' sanduuqa qoraalka loogu xaqiijiyo ujeedada.
Riix 'masixi Hadda'.
Sug qaar ka mid ah markii sida software ka masixi doono xogta aad u.
Riix 'qabtay' si loo dhamaystiro hawsha.
Inkastoo habka kor ku xusan waa mid aad wax ku ool u ah takhalusaya barnaamijyadooda la rabin, waxaad u baahan tahay in ay ogaadaan in aysan suurto gal ahayn in ay tirtirto kuwa Chine in soo preconfigured. Waxay qayb ka ah iPad noqon doonto ka dib markii aad tirtirto barnaamijyadooda kale.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee ay u maareeyaan Chine waxay tahay iyaga oo abaabulka ee bogga kaliya.
Your iPad yeelan doonaan barnaamijyadooda kala duwan oo ku saleysan tirada barnaamijyadooda aad sii. Waxaad isku shaandheyn karaa amarka Chine kuwaas oo aad ku haysan karto oo dhan barnaamijyadooda pre-rakibay oo aydaan u baahan tahay in mid ka mid ah bogaga kuwa oo markaas waxaad iyaga ku illowsiin kartaa.
> Resource > iPad > Sidee in ay tirtirto wixii Apps From iPad joogto ah